We.com.mm - Selena ပုံ Tattoo ကိုတော့ မဖျက်ပေမယ့် Hailey အတွက်ပါ Tattoo အသစ်ထပ်ထိုးပေမယ့် Justin Bieber
Selena ပုံ Tattoo ကိုတော့ မဖျက်ပေမယ့် Hailey အတွက်ပါ Tattoo အသစ်ထပ်ထိုးပေမယ့် Justin Bieber
အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း JB ရဲ့ လက်မှာရှိတဲ့ Selena ကိုကိုယ်စားပြုတဲ့ နတ်သမီးပုံ လေးဟာ အခုချိန်ထိ မဖျက်သေးပဲ ရှိနေသေးတာကို တွေ့ရမှာပါ… ဒီအကြောင်းနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး တော်တော်များများက စိတ်ဝင်စားနေကြသလို သူ့ရဲ့ ဇနီးလောင်းဖြစ်တဲ့ အနေနဲ့လည်း ဒီ Tattoo အပေါ် ဘယ်လို သဘောထားလည်း သိချင်နေကြပါတယ်…ဒီအကြောင်းကို Hailey ရဲ့ အသိမိတ်ဆွေ အသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုမှ Hollywoodlife ကို ဒီအတိုင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်…
လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေတုန်းကတော့ Hailey အနေနဲ့ ဒီ Tattoo ပေါ်က Selena ရဲ့မျက်နှာပုံကို ခဲခြစ်ခြစ်ခြင်းဖြင့် ခြစ်ခြပြီး ဖုံးပစ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း ၊ လုံးဝမမြင်ချင်တဲ့အကြောင်း ၊ ဂျေဘီရဲ့ လက်မောင်းပေါ်မှာ ဒီ Selena ရဲ့ Tattoo ရှိနေခြင်းသည်း သူမရဲ့ စိတ်ကို ခြောက်လှန့်သလိုဖြစ်ခဲ့ကြောင်း ပြောပြခဲ့ပါတယ်…ဒါပေမယ့် ဂျေဘီက သူမကို ဒီအကြောင်းနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး နားလည်အောင်ပြောပြခဲ့တဲ့အတွက် အခုချိန်မှာတော့ သူမအနေနဲ့ ဘာမှမခံစားရတော့ကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်….
ဂျေဘီက Selena ရဲ့ ပုံကိုတော့မဖျက်ပေမယ့် Hailey အတွက်လည်း တစ်ခုထိုးပေးမယ့်အကြောင်း ကတိပေးခဲ့ပါသေးတယ် … ဒီလိုဆိုရင်တော့ JB ရဲ့ ခနာကိုယ်မှာ အချစ်ဟောင်းရဲ့ပုံရော အချစ်သစ်ရဲ့ပုံရော နှစ်ခုလုံးကို တွေ့ရမယ့်သဘောမှာရှိပါတယ်နော်….
ပြတ်ဆဲသွားတဲ့ Ex ရဲ့ တိုက်ခန်းထဲကို ခိုးဝင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့ မိန်းကလေး ဖမ်းဆီးခံရ
နေပြည်တော်မှာ မီးလောင်သေဆုံးနေတဲ့ အမျိုးသမီးသေဆုံးမှုကိစ္စ တရားခံကို ဖမ်းဆီးရမိ
သတင်းသမားတွေကြောင့် မိခင်ကစွန့်ပစ်သွားတဲ့ကလေးကို ပြန်ရှာတွေ့ခဲ့တဲ့ ဖခင်
"ကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့ပါမယ်" ဆိုတဲ့ ကျော်ထက်အောင် နဲ့ Myanmar Idol Season 3
Web star, pop singer အနေနဲ့ပေါ်ပြူလာဖြစ်တဲ့ “Houssein Guney”
ယူနီကုတ် သုံးလျှင် သင့်အတွက် ရလာမည့် အကျိုးကျေးဇူးများ
Longlasting Lipstick တွေဆိုးပြီးရင် ဘယ်လိုပြန်ဖျက်မလဲ…။
ဝူဟန်မှ ပြည်ပထွက်ခွာခွင့်တွေကို ပိတ်လိုက်ပြီ
ကင်မ်ဂိုအွန်းရဲ့ The King ရိုက်ကွင်းဆီ coffee truck ပို့ပေးခဲ့တဲ့ ဂေါင်ရိုးနဲ့ လီဒုံဝု